आठ दिनसम्म अस्पतालको ढोका कुरेका व्यक्तिको उपचार नपाई मृत्यु, मृत्युपछि उपचारको नाटक ! - info4nepal
नेपाल सरकारले गरिबी असायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार भनेर प्रचार प्रसारमा मात्र लाखौको बजेट खर्च गर्ने गर्दछ ।
तर बुटवल स्थीत लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा टिकट काट्ने पैसा जुटाउन नसक्दा अस्पतालको गेटमा नै एक गरीब वृद्धले ज्यान गुमाएका छन् ।
हुदा हँुदा स्थानीयले उपचार खर्च व्याहोर्न बताउँदा पनि अस्पतालले भर्ना नलिएको स्थानीयहरु बताउछन् ।विरामी भएर अस्पताल पुग्दा समेत उन्ले उपचार पाएन्न् । अन्त्यत बिहिवार उनको मृत्यु भयो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनको मृत्युपछि मात्रै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले इमरजेन्सी कक्षमा लगेका थिए ।
न्यूज२४ बाट साभार
के टंक बुढाथोकीले अशोक दर्जीको नाम बेचेर पैसा खाएका हुन त् ?
नेपाली काङ्रेसको क्रेज अब बढदै छ फेरि
सुन्दै लाज लाग्नेः मृत्यु भएकाे ४ बर्षपछि बृद्धभत्ता कुम्ल्याउदै